UMpengesi usephinde adume ngakho – Bayede News
UMpengesi usephinde adume ngakho
USIHLALO weChippa United uSiviwe “Chippa” Mpengesi,
Posted on 30/09/2019 by Bayede-News
USIHLALO weChippa United uSiviwe “Chippa” Mpengesi, usephinde wenza adume ngakho ukuthi akhombe indlela umqeqeshi kungakapheli isikathi esingakanani efikile. Emasontweni amabili edlule lesi sikhulu sikhombe indlela uClinton Larsen obesehlale izinyanga eziyi-8 kuleli qembu lasePort Elizabeth.
Ukuxosha kwakhe uLarsen wabe eseqasha uDuran Francis, njengebamba mqeqeshi. Namuhla sekuvele izindaba zokuthi lesi sikhulu sesimbonise afike ngayo uFrancis esaqeqeshe imidlalo emibili nje vo.UFrancis wodumo kuBay United FC umdlalo wakhe wokuqala wayebhekene neBloemfontein Celtic wadlala ngokulingana, kowesibili wahlulwa iMaritburg United ngegoli elilodwa eqandeni.Abanye abaqeqeshi abaxoshwa uMpengesi uRoger Sikhakhane ongasekho emhlabeni, uTeboho Moloi, uFarouk Abrahams, uMark Harrison, uJoel Masutha noDan Dance Malesela.
Umdlalo olandeyo weChilli Boys (iChippa United) uzokuba kusasa lapho izotholana phezulu neBidvest Wits, lo mdlalo uzoqala ligamenxe elesi-7 eSisa Dukashe Stadium. Umqeqeshi omusha ngokusho kukaMpengesi uthe uzomenyezelwa kusasa, kodwa emdlalweni weBidvest Wits izintambo zizobanjwa uMbuyiselo Sambu oyisekela mqeqeshi.
UFrancis uzokwehlela phansi ayoqeqesha iChippa United egijima ku-ABC Motsepe League.